Mario Balotelli oo daar Weyn ka iibsaday Liverpool isaga oo ka bixiyey £4.75m Gini +SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Mario Balotelli oo daar Weyn ka iibsaday Liverpool isaga oo ka bixiyey £4.75m Gini +SAWIRO
Mario Balotelli ayaa lagu soo waramayaa inuu u guuray daar weyn oo uu ku iibsaday 4.7 milyan oo ginni oo dhacda koonfurta Liverpool ka dib markii uu dhowaan kusoo biiray kooxda ka dhisan gobolka Merseyside.
Xiddiga reer Italy ayaa heshiis 16 milyan oo ginni ah ugu soo dhaqaaqay kooxda ka dhisan Anfield oo bishii lasoo dhaafay kasoo iibsatay AC Milan, 18 bilood ka dib markii uu ka tegay England oo uu ku biiray Rossoneri.
Jariiradda Metro ayaa soo qaadaneysa sawirada guriga cusub ee uu iibsaday weeraryahankaan, kaasoo leh shan sariir oo jiif ah, isla markaana sidoo kale leh meelo ay kusoo degaan diyaaradaha qummaatiga u duula, qol la isku kululeeyo iyo meel lagu cabo khamriga.
Balotelli ayaa sameeyey dhacdo caan baxday ka dib markii uu iska gubay gurigiisa markii uu joogay Manchester City xilli uu musqusha kula ciyaarayey walxaha dabka dhaliya.
One thought on “Mario Balotelli oo daar Weyn ka iibsaday Liverpool isaga oo ka bixiyey £4.75m Gini +SAWIRO”
08/09/2014 at 15:40
ninkan caadi ma aha dadka meelo badan ayuu uga duwan yahay isku celcelis wa aad u nin sare